Chọpụta Ụdị akụkọ - ESTAmerica US ESTA E-Filing Services Traveling
Na-enyocha ọnọdụ ESTA gị?
A chọrọ ozi ndị a iji weghachite ngwa gị. Ọ bụrụ na ị maara nọmba ngwa gị, biko jupụta E-File dị n'okpuru ebe a. Ọ bụrụ na ị maghị nọmba ngwa gị, Biko E-File Ihe Ọhụrụ.
Gbanwee Ebumnuche APPLICATION
A chọrọ mpaghara niile.
Ndi Ikede Akpan̄ ke Akwa ESTAmerica.org?*
Enweta nnata site na oge ịkwụ ụgwọ
Ekwenyere m na iwu nzuzo.
Ahịa: $ 14.99
Ọ bụrụ na i tinyere ya na ESTAmerica.org ọrụ a bụ n'efu! Biko laghachi ma gbakwunye nọmba nnata gị.
Nọmba kaadị Ọnwa010203040506070809101112 Year20192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038 Ụbọchị mmebi Koodu nchekwa Aha Onye ji kaadị
Ị ga-enwetakarị ikike njem njem ESTA n'ime awa ole na ole. Otú ọ dị, nyochaghachi, na nhazi ngwa nwere ike iwe ogologo. N'okwu a, ị nwere ike ịtụ anya na ị ga-ezigara gị ikike iziga njem n'ime ma ọ dịkarịa ala Awa 72. Biko nye anyị ohere iji nyochaa ma dezie ngwa gị. Ọ bụrụ na ịchọta nsogbu gị na ESTA Travel Visa Passport Application, Anyị ga-agbalị ịnweta gị na nọmba ekwentị, na ozi-e na ngwa ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-eche na ị nyere ozi na-ezighị ezi ma ọ bụ mkpa imelite ozi gị na ESTA Travel Visa Passport Application, ị nwere ike mgbe niile E-File ma ọ bụ kpọtụrụ anyị. Anyị nọ ebe a 24 / 7.
Kedu ihe m ga eme ma ọ bụrụ na ozi m paspọtụ agbanweela ma ọ bụ kubie ume?
Nweta akwụkwọ ikike ọhụrụ ma ọ bụ na e nwere mgbanwe maka ozi paspọọdụ gị, ị ga-etinyerịrị maka ikike ESTA Visa Passport Travel Authorization. Hụ Ozi dị aṅaa ka m nwere ike imelite? maka ndepụta zuru ezu nke ozi nwere ike gbanwere mgbe ntinye akwụkwọ nke ngwa gị.
Kedu ozi m nwere ike imelite na ngwa ESTA m?
Tupu ịnyefe (ETA) ngwa ikikere nke njem nleta na ozi nkwụ ụgwọ achọrọ, ị nwere ike imelite ngwa data ngwa ọ gwụla ma paspọtụ obodo na paspọtụ mba. Ozugbo a kwadoro ngwa, i nwere ike imelite otu n'ime ihe ndị a:
Kedu ihe ma ọ bụrụ na e mehiere na ngwa ESTA m?
ESTAmerica.org ga - ekwe ka ndị na - ede akwụkwọ nyochaa ma dezie data ha tupu ha edozi ngwa ahụ, gụnyere nyochaghachi nọmba paspọtụ. Tupu ịnyefe ngwa na ozi ịkwụ ụgwọ achọrọ, ịnwere ike ịhazigharị data data ngwa ọ bụla ma e wezụga nọmba paspọtụ na mba na-esite na paspọtụ. Ọ bụrụ na onye na-achọ ọrụ mehiere na paspọtụ ha ma ọ bụ ozi gbasara ndụ ọ ga-achọ idobe ngwa ọhụrụ. A ga-akwụ ụgwọ ndị metụtara ya maka ngwa ọ bụla ọ bụla e mere.